MAAMUL-XUMO MUUQATA: ”Inter malaha qaab-dhismeed maamul” – Leonardo de Araujo oo ka hadlay cillad cusub! – Gool FM
MAAMUL-XUMO MUUQATA: ”Inter malaha qaab-dhismeed maamul” – Leonardo de Araujo oo ka hadlay cillad cusub!
Raage November 10, 2016
(Milano) 10 Okt 2016 – Leonardo de Araujo ayaa rumaysan in cillada Inter Milan ay tahay sida uu yiri habacsanaan dhanka maamulka ah isagoo leh – “Haddii aadan aqoonin qofka mas’uulka ah, mashiinku wuu is xirayaa”.
Ninkan reer Brazil oo horay usoo layliyay kooxo ay ka mid tahay Nerazzurri lafteedu, oo weliba lala xiriirinayay inuu dib ugusoo laaban doono kaddib cayrintii Frank de Boer, waloow uu diiday oo markii dambe la magacaabay Stefano Pioli.
“Mashruuc xajmigan leh kama bilowdo macallinka. Sunnig waxay la wareegtey balse haddii aad qaaddo mas’uuliyadda Inter waa inaad si joogto ah ula socotaa oo aad qaab-dhismeed u samaysaa,” ayuu yiri Leonardo oo la hadlayay La Stampa.
“Inter waa koox guuleed, lacagina kuma filna, waxay u baahan yihiin dareen iyo qaab-dhismeed maamul oo heer sare ah.
“Markii uu tegey [Massimo] Moratti, Inter waxaa ka lumay yoolkii, sida aan u arkana sooma laaban doono: Weligay ma arkin qof Inter sidaa u jecel.” ayuu raaciyay Leo.
“Haddii aadan aqoonin qofkii xilka haya, qofkii go’aanka gaaraya, deeto waa caadi inay makiinaddu jaam garoowdo oo ay shaqayn waydo.” ayuu yiri Leo oo sheegay in Erick Thohir uusan isku dayin dhismaha maamul fadhiya.
Ceebta dhanka maamulka ee Inter ayaa soo baxday markii la eryay macallinkii Frank de Boer, tiiyoo ay jirto in qayb maamulka ka tirsani ay codka kalsoonida siiyeen 4 maalmood uun kahor cayrintiisii, waxaana xitaa kaddib is casiley Micheal Bolingbroke oo ahaa Xoghayihii Guud ee kooxda.
Waxaa kasii darnayd in markii la waraysanayay macallimiintii ay kooxdu doonaysay buska looga tegey [Javier] Zanetti, [Giovanni] Gardini iyo [Piero] Ausilio taasoo u muuqatay weji gabax dhanka maamulka ah.
Diego Costa oo dhaawac looga saaray xulka Spain, iyadoo bedelkiisana loo yeeray